လှပလှနျးတဲ့ ခန်ဓာကိုယျလေးကို တှနျ့လိမျပွီး အမိုကျစားကကှကျလေးနဲ့ ကပွထားတဲ့ ဖူးပှငျ့သခငျရဲ့ အလနျးစား ဗီဒီယိုလေး – Cele Cupid
EverBest M | May 4, 2021 | Celebrity | No Comments
မငျး သမီး ခြော လေး ဖူးပှငျ့သခငျ က တော့ ကွျော ငွာ တှေ ၊ ဗီဒီ ယို ဇာတျကား တှေ နဲ့ ရုပျ ရှငျ ဇာတျကား ကွီး တှေ မှာ ပါ ဝငျ သရုပျ ဆောငျ ခဲ့တဲ့ မငျး သမီး လေး ပဲဖွဈ ပါ တယျ..။ ဖူးပှငျ့သခငျ က မွနျ မာ ဆနျ တဲ့ အလှ အပ တှေ ကို ပိုငျဆိုငျ ထားပွီး အပွုံး ခြိုခြို လေး နဲ့ အ ရမျး ခဈြ စရာ ကောငျး သူ လေး ဖွဈ ပါ တယျ..။ ဖူးပှငျ့သခငျ က လကျ ရှိ မှာ လညျး အနု ပညာ အလုပျ တှေ ကို ဖွညျး ဖွညျး မှနျမှနျ လုပျ ဆောငျ နဆေဲဖွဈ လို့ ပရိသတျ တှေ က လညျး တဈခဲ နကျ အား ပေး ဝနျးရံ ကွ ပါ တယျ နျော … ။
ဖူးပှငျ့သခငျ က စိတျ ထား လေး ဖွူ စငျ ပွီး သဘော ကောငျး ဖျော ရှေ လို့ လူခဈြ လူခငျ လညျး ပေါ မြား ပါတယျ..။ ဖူးပှငျ့သခငျ က သူမ ရဲ့ အလှ အပ တှေ ကို အမွဲ ဂရု စိုကျ ပွီး လေ့ ကငျြ့ ခနျး လညျး လုပျ တာ ကွောငျ့ ကဈြ လဈ သှယျ လြ တဲ့ ခန်ဓာကိုယျ လေး ကို လညျး ပိုငျဆိုငျ ထား ပါ တယျ..။ ဖူးပှငျ့သခငျ က တော့ လူ တိုငျး ကစား ကွ တဲ့ Tik Tokလေး တှေ ကိုလညျး သူမ ရဲ့ ဟနျပနျ အမူ အရာ လေး တှေ နဲ့ ခဈြ စရာ ကောငျးအောငျ ကစားတတျ ပါသေး တယျ နျော..။ ဖူးပှငျ့သခငျ ရဲ့ Tik Tok လေး တှေ ကလညျး နာရီ ပိုငျး နဲ့ တငျ ကွညျ့ရှု့ အားပေး သူ တှေ မြားပွား တာကို တှရေ့ ပါ တယျ … ။
အခု ဆိုရငျ လညျး ဖူးပှငျ့သခငျ က ဆှဲ ဆောငျ မှု ရှိတဲ့ ပုံစံ လေး နဲ့ ထိုငျ‌နေ ပွီး စက်ကနျ့ ပိုငျး အတှငျး မှာ ပဲ ရုတျ တရကျ ပွောငျးလဲ ကာ Tik Tok ကစား ထား တာ ဖွဈ ပါ တယျ .. .။ ဖူးပှငျ့သခငျ ရဲ့ ပုံစံလေး က ပုရိသ တှရေဲ့ အ သညျး နှလုံး ကို လှုပျခတျ သှား ရ လောကျ အောငျ အမိုကျ စား စတိုငျလျ လေးဖွဈ နေ တာပါ နျော..။ ဖူးပှငျ့သခငျ က တော့ သူမ ကို အား ပေးနေ တဲ့ပရိသတျ တှေ အ တှကျ တဈ နေ့ တဈမြိုး မရိုးရ အောငျ အမိုကျ စားTik Tok လေး တှေ က စား ပွီး လူမှု ကှနျယကျ စာမကျြ နှာ မှာ တငျပေး လာ တာပဲ ဖွဈ ပါ တယျ နျော … .
မင်း သမီး ချော လေး ဖူးပွင့်သခင် က တော့ ကြော် ငြာ တွေ ၊ ဗီဒီ ယို ဇာတ်ကား တွေ နဲ့ ရုပ် ရှင် ဇာတ်ကား ကြီး တွေ မှာ ပါ ဝင် သရုပ် ဆောင် ခဲ့တဲ့ မင်း သမီး လေး ပဲဖြစ် ပါ တယ်..။ ဖူးပွင့်သခင် က မြန် မာ ဆန် တဲ့ အလှ အပ တွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး အပြုံး ချိုချို လေး နဲ့ အ ရမ်း ချစ် စရာ ကောင်း သူ လေး ဖြစ် ပါ တယ်..။ ဖူးပွင့်သခင် က လက် ရှိ မှာ လည်း အနု ပညာ အလုပ် တွေ ကို ဖြည်း ဖြည်း မှန်မှန် လုပ် ဆောင် နေဆဲဖြစ် လို့ ပရိသတ် တွေ က လည်း တစ်ခဲ နက် အား ပေး ဝန်းရံ ကြ ပါ တယ် နော် … ။
ဖူးပွင့်သခင် က စိတ် ထား လေး ဖြူ စင် ပြီး သဘော ကောင်း ဖော် ရွေ လို့ လူချစ် လူခင် လည်း ပေါ များ ပါတယ်..။ ဖူးပွင့်သခင် က သူမ ရဲ့ အလှ အပ တွေ ကို အမြဲ ဂရု စိုက် ပြီး လေ့ ကျင့် ခန်း လည်း လုပ် တာ ကြောင့် ကျစ် လစ် သွယ် လျ တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် လေး ကို လည်း ပိုင်ဆိုင် ထား ပါ တယ်..။ ဖူးပွင့်သခင် က တော့ လူ တိုင်း ကစား ကြ တဲ့ Tik Tokလေး တွေ ကိုလည်း သူမ ရဲ့ ဟန်ပန် အမူ အရာ လေး တွေ နဲ့ ချစ် စရာ ကောင်းအောင် ကစားတတ် ပါသေး တယ် နော်..။ ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ Tik Tok လေး တွေ ကလည်း နာရီ ပိုင်း နဲ့ တင် ကြည့်ရှု့ အားပေး သူ တွေ များပြား တာကို တွေ့ရ ပါ တယ် … ။
အခု ဆိုရင် လည်း ဖူးပွင့်သခင် က ဆွဲ ဆောင် မှု ရှိတဲ့ ပုံစံ လေး နဲ့ ထိုင်‌နေ ပြီး စက္ကန့် ပိုင်း အတွင်း မှာ ပဲ ရုတ် တရက် ပြောင်းလဲ ကာ Tik Tok ကစား ထား တာ ဖြစ် ပါ တယ် .. .။ ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ ပုံစံလေး က ပုရိသ တွေရဲ့ အ သည်း နှလုံး ကို လှုပ်ခတ် သွား ရ လောက် အောင် အမိုက် စား စတိုင်လ် လေးဖြစ် နေ တာပါ နော်..။ ဖူးပွင့်သခင် က တော့ သူမ ကို အား ပေးနေ တဲ့ပရိသတ် တွေ အ တွက် တစ် နေ့ တစ်မျိုး မရိုးရ အောင် အမိုက် စားTik Tok လေး တွေ က စား ပြီး လူမှု ကွန်ယက် စာမျက် နှာ မှာ တင်ပေး လာ တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် နော် … .
ဝဘောဂီဆေးရုံမှာ တာဝနျကနြတေဲ့ ဆရာဝနျ၊ သူနာပွုတှေ နဲ့ ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးတှအေတှကျ ကွကျကွျော နဲ့ ပီဇာတှေ ပို့ပေးခဲ့တဲ့ Sinon Loresca
အနုပညာအလုပျတှေ ရပျနားထားရပမေယျ့ ပရိသတျတှနေဲ့ အဆကျအသှယျ မပွတျသှားခငျြဘူး ဆိုတဲ့ စိုးမွတျသူဇာ
အတွင်းသား အလှတွေ အထင်းသားမြင်နေရတဲ့ ဇာပါး ဖက်ရှင်လေးနဲ့ အရမ်းကိုလှနေတဲ့ သဇင်ဦး